အောင်ခိုင်မြင့် | MoeMaKa Burmese News & Media
Posts Tagged ‘ အောင်ခိုင်မြင့် ’
အောင်ခိုင်မြင့် – စာပေငတ်နေတဲ့ အဝေးရောက်ငှက်၏ အမေရိကန်ယူတိကာ စာပေဟောပြောပွဲခရီးအစ
အောင်ခိုင်မြင့် – စာပေငတ်နေတဲ့ အဝေးရောက်ငှက်၏ အမေရိကန်ယူတိကာ စာပေဟောပြောပွဲခရီးအစ (မိုးမခ) သြဂုတ် ၂၄၊ ၂၀၁၇ မြန်မာပြည်၏ အမှောင်ဖုံးသော ကာလများဟု ဆိုရမည့် ခေတ်အဆက်ဆက် စစ် အာဏာရှင် စနစ်အမျိုးမျိုးအောက်မှာ ကြံ့ကြံ့ခိုင်...
အောင်ခိုင်မြင့် ● ကမ္ဘာ့အရွေ့နှင့် မြန်မာအရေး၊ အတွေးအခေါ်တော်လှန်ရေး (မိုးမခ) ဇွန်လ ၁၄၊ ၂ဝ၁၇ ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲ သစ်လွင်နေသော ကမ္ဘာကြီးသည် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လုံခြုံရေး၊ စစ်ရေးဆိုင် ရာ ကိစ္စရပ်များသည်...
အောင်ခိုင်မြင့် ● တော်လှန်ရေး နိုင်ငံရေးနှင့် ဘဝအတွေ့ အကြုံများ – အပိုင်း (၂) (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၇ (၁) မြန်မာပြည်တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပြုတ်ကျရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖြစ်ပေါ်ထွန်းကားရေးအတွက်...
အောင်ခိုင်မြင့် ● တော်လှန်ရေး နိုင်ငံရေးနှင့် ဘဝအတွေ့အကြုံများ – အပိုင်း (၁) (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၇ ကျနော်သည် ဘဝရပ်တည်ရေးအတွက် တဖက်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနေဖြင့် ကနေဒါနိုင်ငံတွင် တတ်မြောက်ထား သော...
အောင်ခိုင်မြင့် ● ၂၁ ရာစုခေတ်တွင် အတွေးအခေါ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၆ ၂၁ ရာစုခေတ်တွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ စီးမျောပျံ့နှံ့မှုများအပါအ၀င် ယနေ့ကမ္ဘာ ကြီး၏ နေ့စဉ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်နေမှုများသည်...
အောင်ခိုင်မြင့် – စစ်နှင့် စနစ်၏သားကောင်များမှ စုပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့သောနိုင်ငံ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၆ ဦးနှောက်၏ အတွေးအခေါ်များကို ပိတ်ဆို့့မနေစေလျက် အရာရာကို တရားသေ တသမတ်ထဲမထားပဲ ခေတ်နှင့်ဆီလျော်သော အတွေးသစ်...
အောင်ခိုင်မြင့် ● တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီက နုနု၊ စစ်မုန်တိုင်းက ထန်ထန်ခေတ်ကြီးမှာ ….
အောင်ခိုင်မြင့် ● တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီက နုနု၊ စစ်မုန်တိုင်းက ထန်ထန်ခေတ်ကြီးမှာ …. (မိုးမခ) မေ ၁၊ ၂၀၁၆ ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ပွားနေစဲတိုင်းပြည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကတက်လာတဲ့ အနိုင်ရပါတီကို အာဏာလွှဲ ပြောင်းပေးမှုတွင်လည်း အရှည်ကြာဆုံးအဖြစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်တင်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။...
အောင်ခိုင်မြင့် – ကောင်းကင်သစ်မှာ သာတဲ့လ
အောင်ခိုင်မြင့် – ကောင်းကင်သစ်မှာ သာတဲ့လ (မိုးမခ) ဧပြီ ၆၊ ၂၀၁၆ ငြိမ်းချမ်းရေး လရောင်ချစ်သူတွေရဲ့အနာဂတ်သစ် စိမ်းလန်း မျှော်လင့်ခြင်း ကောင်းကင်သစ် သက္ကရာဇ်နှစ်သစ် အိမ်မက်ကို ထုဆစ်နေတယ်..။ လှိုင်းထန်ခဲ့ ခေတ်ပင်လယ်ကို အတူဖြတ်သန်းရ...
အောင်ခိုင်မြင့် – အတော်ရင့်ကျက်နေတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ တောင်ပံခတ်စဲ
အောင်ခိုင်မြင့် – အတော်ရင့်ကျက်နေတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ တောင်ပံခတ်စဲ (မိုးမခ) မတ် ၂၀ ၂၀၁၆ ရှုပ်ပွ ရင်ဝယ်၊ အိပ်လို့မရတာ ကြာပြီး ဒုက္ခပင်လယ်၊ ပိတ်ဆို့ ခဏတာ ကာဆီးနေတယ်..။ တသက် မှောင်မိုက်တဲ့...